Buy Shamwow(ရေစုပ် အဝတ်) (20,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 242ရက်​
ကားပေါ်က မိုးရေတွေအတွက် အဝတ်စ များစွာ မလိုတော့ပါဘူး။
အပြင် အကြာကြီးသွားရလို. ရေခဲသေတ္တာ defrost ကျတဲ့
ပြတင်းပေါက်က မိုးရေများ သုတ်ဖို.အတွက်
shamwow တစ်ခုထဲနဲ. အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
ခြေသုတ်ခုံမှ ရေတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ပြန်စုပ်ထုတ်နိုင်ပါမယ်။
ဈေးနှုန်း – ၂သောင်း (လေးခု ပါသည်။)
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍
Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။
အမည်: Shamwow(ရေစုပ် အဝတ်)